Accueil > Gazetin'ny nosy > Kianja Barea : Mety hogiazan’ny Sinoa
Ny herinandro lasa teo no nivoaka ny vaovao fa vola maherin’ny 17 tapitrisa dolara na manodidina 68 miliara ariary no mbola tsy voaloan’ny fanjakana malagasy amin’ilay orinasa sinoa China Stadium Construction Overseas Development (CSCOD) tamin’ny fanamboarana ny Kianja Barea Mahamasina. Tsy fantatra mazava moa ny tena marina satria raha ny fanazavana nomen’ingahy Gérard Andrimanohisoa, tompon’andraikitra voalohany tamin’io tetikasa lehibe io, dia maherin’ny 6 tapitrisa dolara no tsy mbola voaloa fa tsy marina ilay hoe 17 tapitrisa dolara.
Raha ny zava-misy atsy Ouganda amin’izao fotoana no jerena, dia mety hogiazan’ny Sinoa ity kianja Barea ity sy ireo fotodrafitrasa lehibe hafa nantsangany eto amintsika. Ny zava-misy ao Ouganda mantsy dia miomana amin’ny fanagiazana ny seranampiaramanidina iraisam-pirenena Entebbe ao Kampala ny EXIM Bank China izay nampindram-bola 207 tapitrisa dolara nentin’ny fanjakana ougandais nanavaozana an’io seranampiaramanidina lehibe indrindra ao Ouganda io. Ny antony, tsy nahaverina ny
trosa ny fanjakana any an-toerana ka araka ny fifanarahana nifanaovana andaniny sy ny ankilany, dia azon’ny Sinoa hatao ny mangeja ilay seranampiaramanidina raha toa ka tsy voahefa araka ny tokony ho izy ny vola.
Mety hitranga eto Madagasikara koa io zavatra ataon’ny Sinoa ao Ouganda io, izany hoe hogiaziny ny kianja Barea Mahamasina raha toa ka tsy voaloan’ny fanjakana ny volan’ny orinasa CSCOD. Tsy ny kianja Barea ihany anefa no halain’ny Sinoa amin’izay fotoana izay fa hatramin’ireo fotodrafitrasa lehibe hafa nantsangany teto amintsika ka mbola hanany vola amin’ny Fanjakana malagasy, isan’izany Sera-nampiaramanidina iraisam-pirenena vaovao eny Ivato na ny Ravinala Airports.